Dameeri Dhaan Raacday! – Rasaasa News
Apr 16, 2010 Eritrea, ethiopia, Ogaden, ONLF
Kooxda Jwxo-shiil, oo ku wareersan beentii, kolka ay garan waayaan wax alaale wax ay sameeyaan ayey qasaan Jaaliyadaha geeska Afrika. Arintaas oo sababta in aad ku dhex arkayso calanka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeeniya [Jwxo] oo ka dhex muuqda meelo aan munaasab ahayn u ahayn.
Waxaa April 13, 2010 magalada Oslo ee dalka Norway waxaa ka dhacay banaanbax ay abaabushay Jaaliyada Eritrea, kaas oo ay kaga soo horjeeday cunaqabataynta saaran xukuumada Eritrea. Banaanbaxaas oo ay abaabushay safaarada Eritrea u fadhida dalalka Scandinivian, dadka Eritreanka ah ee banaan baxan ka qayb galay ayaa iyagu aad uga xun cunaqabataynta iyaga oo ka yaaban in ay saamayso shacabka Eritrea.
Banaanbaxaas waxaa aad uga dhex muuqda koox wadata calanka Jwxo, oo iyadu taageersan kooxda Jwxo-shiil, ee cirka iyo dhulka kala garan la,a. Ma aha markii kowaad iyo markii 2aad toona ee kooxda Jwxo-shiil, ay banaanbaxyo kala qayb galaan ama iyaga laftigooduba ay abaabulaan banaabaxyada u danaynaya xukuumada Eritrea.
Waxaa sharci daro caalamiya ah in dhibaato aan adiga dalkaaga lagu samayn ay dadkaagu dal kale ku waxyeeleeyaan arintaas oo hadii dadkaasi ay lee yihiin dal xor ah in laga qaado talaabo, hadii ayna lahayn dal xor ahna waxaa loo arki in ay yihiin dad waalan oo argagixiso ah [terms of terrorist can be discribed an act of valition someone does outside of his/her soil].
Ma jiraan qoomiyad ama dal ku yaal geeska Afrika oo kala qayb qaata banaanbaxyada ay samayso xukuumada Eritrea, dadka kaliya ee ka dhex muuqda Eritrea waa kooxda Jwxo-shiil. Kooxdan oo samaysa ficilo ka fog ama ka dhan ah waxyaabaha uu aaminsan yahay halganka ay wado ONLF, ayaan ilaa iyo hada la garanini ujeedada ay lee yihiin.
Ethiopia iyo Eritrea waxaa ka dhaxaysa colaad bilaabatay 1998, ururka ONLF-na waxaa uu dagaal kula jiraa dalka Itobiya tan iyo kolkii uu burburay halgankii ay waday WSLF, ujeedada halganka ay ONLF wadana waa sidii lagu xoraynlahaa dhulka Somalida Ogadeeniya.
Kooxda Jwxo-shiil, oo ujeedo la,aan ah ayaa waxay u jirtaa oo kaliya ceebaynta halganka Somalida Ogadeeniya ee ay horseedka ka tahay Jwxo. Hadii ay taageero siiso kooxdiisa Eritrea, taas micnaheedu ma aha in dhalinyarada Somalida Ogadeeniya ay qaarkood noqdaan Eritrea.
Dhalinyarada aan aqoonta lahayn ee taageera Jwxo-shiil, sida xun u fahmay Eritrea, waxaan u sheegaynaa in ayna Eritrean ahayn.